Mety Hitondra Fiovana Ara-politika Ao Angola Ve Ny Taona 2017? Tsia Hoy Ny Maro · Global Voices teny Malagasy
Mety Hitondra Fiovana Ara-politika Ao Angola Ve Ny Taona 2017? Tsia Hoy Ny Maro
Voadika ny 17 Janoary 2017 13:09 GMT
Vakio amin'ny teny English, Español, русский, Ελληνικά, Português
Ny Antenimieram-pirenena ao Luanda, renivohitra Angola. Sary: David Stanley avy any Nanaimo, Canada. CC BY 2.0,
Toa nanambara ny filoha Angoley José Eduardo dos Santos (JES) rehefa 37 taona teo amin'ny fitondrana fa tsy hilatsaka amin'ny fifidianana izay hatao amin'ny faramparan'ny taona 2017 izy. Araka ny onjampeom-bahoaka (RNA), ny Minisitry ny Fiarovana ao amin'ny firenena amin'izao fotoana izao sady filoha lefitry ny antokon'ny fitondrana Movimento Popular de Libertação de Angola (MPLA), João Lourenço, no ho lasa kandidàn'ny antoko amin'ny fifidianana ho avy.
Tamin'ny Martsa 2016, araka ny notaterin'ny Global Voices, nanambara fanavaozana ara-politika izay noeritreretina hatao amin'ny taona 2018 tamin'ny vahoaka i dos Santos. Maro ny Angoley no nilaza ny teny hoe “tsy mino raha tsy mahita ” manoloana ny fampanantenana fanavaozana. Toy izany ihany koa no mihatra amin'ny fitarihana tetezamita rehetra, satria mbola hitarika ny MPLA i dos Santos rehefa miala amin'ny fitondrana ary tsy nahavita hanamafy ny firotsahan'i Lourenço hofidiana izay nokasaina natao tamin'ny 10 Desambra ny MPLA.
Graciano Celebridade ,mpisera Facebook , no iray amin'ireo maro izay sady manohana ny fialan'i Jes no manohana ihany koa ny fialan'ny rafitra feno kolikolin'ny MPLA iray manontolo nitondra ny firenena hatramin'ny fahaleovantena avy amin'ny Portiogaly tamin'ny taona 1975.
Tsy ny fanendrena an'i João Lourenço no tena zava-dehibe, fa ny fialan'ny antoko naman'ny Salazar * … efa nasehon'ny MPLA fa tsy manana traikefa hitondra ity firenena ity izy ireo, manao ny [governemanta] ho fomba iray hampitomboana [ireo] harenany izy ireo. Misy olona ve afaka [mampiseho] ahy mpikambana ao amin'ny MPLA, ka tsy manan-karena? Manadino ny tena tanjona izay hitondrany ity firenena ity izy ireo… Efa nandao ny JMPLA [ tanora MPLA ] aho, nahita seho mampiahiahy maro aho. mila ny vahoaka [ny] MPLA rehefa mitady vato izy ireo…
Nieritreritra toy izany koa i Dorivaldoy Doy:
Te hilaza aho fa mila soloina ny MPLA; tsy mila olona MPLA hafa izahay. Mila olona avy amin'ny antoko hafa mba ho filohan'ny Angola, eny, tsy maninona izay antoko misy azy, fa tsy olona avy amin'ny MPLA fotsiny. Mila na mila manandrana ho ao anatin'ny fanoherana ny MPLA, antokon'ny mpanohitra fa tsy antokon'ny fahefana … ampy izay ny fitondrany! … Mila fahaiza-manao vaovao indray izahay…
Nanohana ny fialàn'i José Eduardo dos Santos i Nelson Tavares:
Fotoana izao mba handehanan'ny filoha hiala sasatra, ary hankafy ny fiainana indray, ka hanome fahafahana ho an'ny hafa, ka hisy ny hevi-baovao, ary iza no mahalala, mety ho hery vaovao ihany koa mba hanohizana ny fanarenana indray ny firenena.
Misy ny olona sasany no mieritreritra fa fomba iray mba hihazonan'i José Eduardo dos Santos ny fahefana fotsiny ny fanendrena an'i João Lourenço :
Araka an'i Mariza Lopez Aziram :
Mety ho filoham-pirenena mihitsy i João Lourenço, kanefa mbola hanome baiko hatrany an’ Ingahy João Lourenço Ingahy Zé [aka General Zé Maria – mpanao politika miaramila matanjaka] sy ny ekipan'ny MPLA rehetra . Koa tsy hisy na inona na inona hiova na dia hiova aza ny filoha .
Nisalasala ny iray amin'ireo mpikatroka malaza indrindra ao Angola, Rafael Marques, fa tsy hisy ny tetezamita avy amin'ny fitondrana MPLA . Nasongadiny fa efa nanambara fanaovana drafitra fisotroan-dronono imbetsaka ny filoha teo aloha, fa kely ny fiovana.
Nisalasala amin'ny hisian'ny fiovana goavana haingana ihany koa i José Severino, filohan'ny Fikambanan'ny Mpandraharahan'ny Orinasa ao Angola (AIA), izay mahafantatra tsara ny asan'ireo mpanao politika ao amin'ny mpanatanteraka.
Heveriko fa mety hisy ny tahan'ny fampandrosoana ambony kokoa noho ny amin'izao fotoana izao raha tsara tantana ny loharanon-karenaao ato amin'ny firenena, kanefa ny Drafitra Nasionaly Fampandrosoana (PND) no mametraka ny tari-dalana fototra, izay nampiasain'ny antokon'ny fitondrana mba hitari-dalana azy amin'ny fijerena ny fifidianana ho avy.
Nanatsoaka hevitra ihany koa ny mpahay toekarena sady mpampianatra any amin'ny Oniversite ,Faustino Mumbica fa tsy hitondra any amin'ny rafitra ara-politika vaovao ny fiovana ao an-tampony :
Ireo no fiovana izay tsy hitondra vokatra lehibe akory, ary raha raisina fa efa miditra ao anatin'izany rafitra izany ireo olona hiditra ao, dia ho tafiditra ao anaty raharaham-panafintohinana ihany koa ny anaran'izy ireo ary dia tsy hahatapa-kevitra hanapaka ny fomba fanaon'ny teo aloha izy ireo.
* Mpanao didy jadona tao Portiogaly tamin'ny taona 1932 hatramin'ny taona 1968 i António de Oliveira Salazar. Na dia hetsika ho an'ny fahaleovantena aza ny MPLA dia, niampanga azy amin'ny fanohizany ny fanararaotana maro tamin'ny fanjanahantany Portiogey ny mpitsikera azy.